Mpamatsy volavolan-tsolika mora zezika manaparitaka masinina mpamatsy rano mpanala sy rano | YiZheng
Inona no atao hoe Screw Extrusion Solid-fluid Separator?
ny Separator fisarahana ranoka matevina dia fitaovana dewatering mekanika vaovao novolavolaina tamin'ny alàlan'ny firesahana amin'ny fitaovana dewatering mandroso isan-karazany any an-trano sy any ivelany ary manambatra amin'ny traikefa momba ny R&D sy ny famokarana. nySeparator fisarahana ranoka matevina dia miompana indrindra amin'ny kabinetra fanaraha-maso, fantsom-panafody, vatana, efijery, fantsom-pamoahana, reducer, counterweight, fitaovana mampidina entana ary faritra hafa, ity fitaovana ity dia ekena tsara ary be mpampiasa eo amin'ny tsena.
1. Ny zezika matevina aorian'ny fisarahana dia manampy amin'ny fitaterana sy ny vidiny lafo amidy.
2. Aorian'ny fisarahana, ny zezika dia afangaro ao anaty bozaka ahitra mba hafangaro tsara, azo amboarina ho zezika organika aorian'ny granulation.
3. Ny zezika nisaraka dia azo ampiasaina mivantana hanatsarana ny kalitaon'ny tany, ary azo ampiasaina hamokarana kankana, hamboly holatra ary hanome sakafo trondro.
4. Ny ranoka misaraka dia afaka miditra mivantana amin'ny pisinina biogas, avo kokoa ny fahombiazan'ny famokarana biogas, ary tsy hosakanana ny dobo biogas mba hanitarana ny androm-piainana.
Fitsipika miasa an'ny Screw Extrusion Solid-fluid Separator
1. Ny fitaovana dia alefa amin'ny motera lehibe amin'ny alàlan'ny paompy slurry tsy manakana
2. Ampitaina eo alohan'ny ampahany amin'ny masinina amin'ny alàlan'ny fametahana auger
3. Eo ambanin'ny fanivanana ny fehin-kibo fanerena sisiny, ny rano dia hoentina avoaka ary hivoaka amin'ny efijery harato ary hivoaka amin'ny fantson-drano
4. Mandritra izany fotoana izany, ny tsindry eo alohan'ny auger dia mitombo hatrany. Rehefa mahatratra sanda voafaritra izy io dia hatosika hisokatra ny seranana famoahana ho an'ny vokatra mivaingana.
5. Mba hahazoana ny hafainganana sy ny atin'ny rano amin'ny famoahana, ny fitaovana fanaraha-maso eo alohan'ny motera lehibe dia azo ahitsy mba hahatratrarana ny fanjakana mivoaka sy mahafa-po sahaza azy.
Fampiharana sy endri-javatra an'ny Screw Extrusion Solid-fluid Separator
(1) Manana fampiharana marobe izy io. Azo ampiasaina amin'ny zezika akoho, zezika kisoa, zezika omby, zezika gana, zezika ondry sy tain-tsakafo hafa.
(2) Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny karazana tantsaha lehibe na kely na karazan'olona mpiompy.
(3) Ny ampahany lehibe amin'ny Separator fisarahana ranoka matevina milina dia natao tamin'ny vy tsy misy fangarony, raha ampitahaina amin'ny fitaovana hafa, ny vy tsy vita amin'ny volo dia tsy mora harafesina, harafesina ary fiainana maharitra.
Fanehoana horonan-tsary mampisaraka amin'ny volo miharo volo
Screw Extrusion Solid-fluid Separator Model Selection
Diameter ny harato sivana
Diametran'ny fidirana ho an'ny paompy
Seranan-tsambo mamoaka rano
Ny vatan'ny masinina dia vita amin'ny vy fanariana, ny hazo Auger ary ny lelany dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304, ny lamba fanivanana dia vita amin'ny vy vy 304.
1. Fahanana amin'ny paompy ho an'ny fitaovam-panjakana
2. Fahanana amin'ny hopper ho an'ny fitaovana matanjaka
Zezika kisoa 10-20ton / h
Zezika kisoa maina: 1.5m3/ h
Zezika kisoa 20-25m3/ h
Zezika maina: 3m3/ h
Teo aloha: Masinina fanangonana zezika mandeha ho azy
Manaraka: Masinina fampifangaroana fampifangaroana disk mitsangana